Hong Kong: GFW Ao HK ? · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: GFW Ao HK ?
Voadika ny 10 Febroary 2018 17:13 GMT
Fotoana fohy avy eo no nanoratan’Ingahy Bijou tao anaty blaogy mikasika ilay raharaha iahiahiana ny PCCW (ilay seham-pifandraisana lehibe indrindra ao HK sy ISP netvigator) ho manivana ilay vohikalan-dahatsoratra isa-maraina ao atsimon'i Shina. Noraisin'ny ESWN ilay raharaha ary niparitaka tao amin'ny tontolon'ny blaogy tao an-toerana, ary nanomboka nanao ny andrany koa ireo blaogera, dia nisy tsy fifankahazoana tamin'izany :
inmediahk.net no namporisika ny mpamaky azy hanandrana ny ISP (mpanome tolotra aterineto) an'izy ireo, misy sasany amin'ireo mpanjifa ny Netvigator afaka niditra tao ihany, maro koa anefa no tsy tafiditra.
sfngan nitatitra tao anaty blaoginy hoe :
Nanandrana niditra tao amin'ilay vohikala aho, fa tsy tafiditra mihitsy, afaka miditra ao ihany aho fa amin'ny alalan'ny Proxy — kanefa ny mpamatsy aterinetiko dia tambajotra manana koriana midadasika ao Hong Kong. Sa fehezin'ny fianakaviana Li koa ilay tambajotra?
Raha marina ny tantaran'ilay sivana anaty aterineto, tena ho raharaha be io resaka io.
Sahiran-tsaina momba ilay toadraharaha ilay Tompomenakelin'i Aberdeen, satria vitany ny niditra tao halina, nefa avy eo tsy tafiditra tao intsony ny maraina.
Letters from China koa nahita fa ankoatry ny PCCW, manana olana mitovy amin'izany koa ireo mpanjifa ny HGC broadband amin'ny fidirana ao anatin'ilay vohikala, samy an'ny fianakaviana Li daholo ireo orinasa roa ireo (Li Kar-shing sy ny zanany lahy, Richard Li). Hoy ilay blaogera nanoratra tamim-panesoana hoe :
Tokony ampahafantarintsika olona maro ny fitondrantena mendrika ataon'ny Netivagtor sy ny HGC broadband. Ry namana isany, manasa anareo aho hanoratra any amin'ny tompon'andraikitry ny serasera hidoka ny fandraisan'anjara mavitriky ny fianakaviana Li amin'ny fananganana fiarahamonina mirindra.
Sidekick koa dia tsy tafiditra tao, ary tena tezitra mafy izy :
Miahiahy aho fa misy idiran'i Hong Kong ny GFW sy ny sivana !!!
Kanefa tsy ny governemanta HKSAR no mpitantana, fa olona matanjaka kokoa noho ny Governemanta.
Tsy rarahako hoe inona no ao anatin'ny votoatin'ny www.ntscmp.com. Na vohikala mikasika ireo lahatsary sokajy faha-3 na 4, na vetavetam-biby, na hetsika tselatra natao hanolanana, na propagandy sinoa tsy miankina amin'ny fanjakana, amin'ny maha mpamatsy tolotra aterineto azy, tsy mety ny fbahanana ilay vohikala ary ny tsy famelàna ahy hiditra ao!
Tanaty lahatsoratra farany navoakany, ESWN niezaka nanome fanazavàna mikasika ilay tsy fifankazahoana :
Sahiran-tsaina toa anareo koa aho mikasika ny zava-mitranga ankehitriny. Aleo lazaiko toy izao, tsy miankina amin'ny endrika ara-teknika. Izao no zava-misy : Raha toa ianao ka mpampiasa Netvigator, mety tsy ho afaka ny hiditra ao amin'ny vohikala NTSCMP.com . Nahoana ? Mety ny fibahanan'i Netvigator io vohikala io no antony, na koa avy aminà olana ara-teknika goavana tsy voafehin'i Netvigator. Kanefa toa tsy manana olana toa izany ireo hafa mpanome tolotra aterineto.
Ho tohin'ny resaka maro mikasika iny raharaha tao amin'ny tontolon'ny Blaogy tao Hong Kong iny (ary asaiko ny olona rehetra hanandrana hiditra ao amin'ny NTSCMP.com sy hilàza ny vokany), araka izany tokony hamaly ireo onjan-kevitry ny maro ny Netvigator (ary azoko antoka fa ho alain'i Apple Daily sy ireo hafa maro koa io raha misy blaogera betsaka manonona io resaka io). Etsy andaniny, afaka ny hilaza ny Netivigator fa tsy nandràra ny NTSCMP.com, fa noho ny olana ara-teknika tsy voafehin'izy ireo izany. Izay. Kanefa, mila fanambaràna tsy misy hatak'andro avy amin'ny Netvigator aho (ary avy amin'ireo mpamatsy aterneto hafa avy ao Hong Kong ihany koa) milaza fa tsy hanakàna vohikala na oviana na oviana izy ireo, na iray aza. TEBOKA. Midika ho fandraisana andraikitra sy fandrosoana izany. Bara iva dia iva io — Ambarao tsotra fotsiny hoe tsy nanao izany ianareo ary tsy hanao izany koa. Sarotra be tahaka ny ahoana izany ? Nahoana no andrasanareo ho resabe manerana ny tontolon'ny blaogy ato Hong Kong ilay izy ?
Mifanohitra amin'izay, raha tsy vitan'i Netvigator ny manala io bara iva dia iva io, inona no mety ho dikan'izay ?